इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व झन् चर्कियो- विश्व - कान्तिपुर समाचार
इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व झन् चर्कियो
इजरायली सेना भन्छ : हमासले १ हजारभन्दा बढी रकेट प्रहार गर्‍यो
हमास नेता इस्माइल हानिया भन्छन् : इजरायलले शान्ति चाहे हामी तयार छौं
वैशाख २९, २०७८ कान्तिपुर संवाददाता
काठमाडौँ — इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमामा सोमबार रातिदेखि चर्किएको द्वन्द्व झन् बढ्दै गइरहेको छ । इजरायली सेनालाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले प्यालेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले अहिलेसम्म १ हजारभन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको जनाएको छ ।
इजरायलको पेट्रोलियम पाइपलाइननजिक देखिएको धूवाँको मुस्लो तस्बिर : रोयटर्स
हमासले जेरुसेलम र तेल अभिभमा इजरायली सेनालाई लक्षित गर्दै हजारभन्दा रकेट प्रहार गरेको जनाइएको छ । इजरायली सेनाले ८ सय ५० वटा रकेट आफ्नो भूमिमा खसेको र प्रतिरक्षा प्रणालीले करिब २ सय रकेट गाजामै खसालिदिएको पनि बताएको छ । हमासले जेरुसेलममा रहेको अक्सा मस्जिदमा इजरायलका तर्फबाट आफूहरुलाई उक्साउने काम भएको र त्यो अहिले गाजासम्म आइपुगेको बताएको छ ।
समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार हमासले इजरायलले टकरावलाई बढाए त्यसले उसैलाई ठूलो क्षति पुग्ने चेतावनी पनि दिएको छ । त्यस्तै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले पनि हमासले यो टकरावको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
इजरायली सेना र हमासबीच आक्रमण जारी
हमासका नेता इस्माइल हानियाले टेलिभिजनमार्फत सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, 'कतार, इजिप्ट र स‌ंयुक्त राष्ट्र संघले सम्पर्क गरी हामीलाई शान्ति स्थापनाका लागि अपिल गरेका छन् । हामीले इजरायललाई यो सन्देश दिएका छौं कि उनीहरु द्वन्द्व चाहन्छन् भने त्यसका लागि हामी तयार छौं । यदि यसलाई उनीहरु रोक्न चाहन्छन् भने त्यसका लागि पनि हामी तयार छौं।'
द्वन्द्व बढ्दै गएपछि इजरायलले लोड सहरमा संकटकाल घोषणा गरेको छ । जहाँ हमासद्वारा हानिएको रकेट लागेर बाबुछोरीको मृत्यु भएको थियो ।
बीबीसीका अनुसार अहिलेसम्म दुवै तर्फका गरी कम्तीमा ४० जना मारिएका छन् । इजरायली सेनाले गाजाका १५० ठाउँमा आक्रमण गरेको छ । इजरायली सेनाको आक्रमणमा परी प्यालेस्टाइनका सर्वसाधारणको मृत्यु भएको बताइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दुवै पक्षलाई द्वन्द्व कम गर्न अनुरोध गरेका छन् । बुधबार यसै विषयमा छलफल गर्न स‌ंयुक्त राष्ट्र स‌ंघको सुरक्षा परिषद्को बैठक बस्दै छ ।
इजरायली रक्षामन्त्री बेन्नी गान्ट्जले भने 'इजरायली आक्रमणको सुरुवात मात्र' भएको बताएका छन् । चरमपन्थी समूहलाई परास्त गरेर दीर्घकालीन रुपमै आफूहरुले शान्ति पुन:स्थापना गर्ने उनको दाबी छ । त्यस्तै हमास नेता इस्माइल हानियले इजरायलले द्वन्द्वलाई बढाए प्रतिक्रियाका लागि आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्यामिन नेतान्याहुले यसअघि मंगलबार हमासले ‘रेड लाइन’ नाघेर आक्रमण गरेको बताएका थिए । । सन् २०१४ को युद्धपछि पहिलो पटक हमासद्वारा रेड लाइन नाघिएको पनि उनले दाबी गरेका छन् ।
पछिल्ला केही दिनदेखि जेरुसेलममा हिंसा भड्किइरहेको छ । जेरुसेलमस्थित अल अक्सा मस्जिदमा जान प्रतिबन्ध लगाइएपछि प्यालेस्टाइनका नागरिक क्रुद्ध भएका छन् । यो मस्जिदलाई इस्लाममा तेस्रो पवित्र स्थान मानिन्छ । यो यहुदीहरुको पनि पवित्र धार्मिक स्थलमा रुपमा रहेको छ ।
प्यालेस्टाइन रेड क्रेसेन्ट सोसाइटीका अनुसार इजरायली प्रहरीसँगको झडपमा ३ सयभन्दा बढी घाइते भएका छन् । सोमबार ‘जेरुसेलम दिवस’ मनाइरहँदा हिंसा भड्किएको हो । सन् १९६७ को अरब–इजरायल युद्धपछि पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरिएको सम्झनामा सोमबार जेरुसेलम दिवस मनाइएको थियो ।
हमासले अल अक्सा र शेख जराह मस्जिदबाट प्रहरी हटाउन पहिलेदेखि नै इजरायलसँग आग्रह गर्दै आएको थियो । उसले दिएको समयसीमा सकिएपछि रकेट प्रहार गरेको बताएको छ ।
सन् १९६७ को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसेलममाथि कब्जा गरेको थियो । त्यसपछि उसले पूरा जेरुसेलमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्दैन । प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसेलमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रुपमा लिँदै आएको छ ।
यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायलबीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक–पटक यसले युद्धको रुप लिएको छ । सन् २०१४ को जुलाईदेखि अगस्टको बीचमा भएको द्वन्द्वमा २२५१ प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए । तीमध्ये १४६२ त सर्वसाधारण नै थिए । त्यस्तै इजरायलका ६ सर्वसाधारणसहित ६७ जना सैनिक मारिएका थिए ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ १२:०६
जगरनाथपुरको एउटै वडाका १ सय ७३ जनामा ज्वरो [फलोअप]
वैशाख २९, २०७८ भूषण यादव
वीरगन्ज — घरैपिच्छे ज्वरो फैलिएको पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिकामा मंगलबारदेखि कोरोना परीक्षण थालिएको छ । पछिल्लो १० दिनमा ११ जनाको मृत्यु र सयौँभन्दा बढी ज्वरोका बिरामी देखिएकाले गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नारायणी अस्पताल र स्वास्थ्य कार्यालयलाई पत्राचार गरी विज्ञ टोली पठाउन अनुरोध गरेको थियो ।
जगरनाथपुर गाउँपालिका-५ स्ठित चिलझपटी टोल । तस्बिर : कान्तिपुर
वीरगन्जबाट गएको टोली र गाउँपालिकाका स्वास्थ्यकर्मीले मंगलबार तीनवटा समूह बनाई जगरनाथपुर गाउँपालिका–५ चिलझपटीका दुईवटा टोलमा घर–घर पुगी बिरामीको विवरण संकलन गरेका थिए । स्वास्थ्य शाखा प्रमुख प्रभेन्द्रप्रसाद साहले चिलझपटीमा १ सय ७३ जनालाई ज्वरो आएको बताए । साहका अनुसार जिल्लाबाट २५ वटा मात्र भीटीएम गएकाले २५ जनाको स्वाब संकलन गरिएको थियो । ११ जना शंकास्पद बिरामीको कोरोना एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो जसमध्ये ७ जनामा पोजिटिभ देखिएको साहले जनाए । पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब नारायणी अस्पताल ल्याइएको छ ।
मध्याह्न चिलझपटी गाउँमा स्वास्थ्यकर्मी पुग्दा अधिकांश स्थानीयले घरको ढोका बन्द गरेका थिए । ‘कतिपयको हातमा अझै क्यानुला थियो,’ कान्तिपुरसँग फोनमा साहले भने, ‘वीरगन्ज लगेर आइसोलेसन वार्डमा राखिएला भनेर कतिपय शंकास्पद खेततर्फ भागेका थिए, धेरैलाई सम्झाई–बुझाई फर्कायौं ।’
१२ जना स्वास्थ्यकर्मी तीन समूह बनाई सबैको घर–घर पुग्ने प्रयास गरेका थिए । सामान्य ज्वरो मात्र आएका तर औषधि सेवन नगरेकालाई औषधि वितरण गरिएको थियो । ‘शंका नगरिएको व्यक्तिमा पनि कोरोना एन्टिजेन पोजिटिभ आएको छ,’ उनले भने, ‘मंगलबार नै गाउँपालिका बोर्डको आकस्मिक बैठक बसी वडा नम्बर ५ सिल गर्ने प्रस्ताव लगेका थियौँ तर वडाध्यक्ष अनुपस्थित हुँदा निर्णय हुन सकेन ।’
मंगलबार बिहान करिब ६ बजेको समयमा नारायणी अस्पतालमा एक सातादेखि उपचार गराइरहेका जगरनाथपुर गाउँपालिका– १ का ३५ वर्षीय कोरोना संक्रमित युवाको मृत्यु भएको थियो । अस्पतालका कोभिड संयोजक डा. सरोज रोशन दासका अनुसार वैशाख २१ गते अस्पताल भर्ना भएका उनमा कडा निमोनिया देखिएको थियो ।
जगरनाथपुरमा १० दिनमा ११ को मृत्यु : चार जनालाई कोराेना पुष्टि, बाँकीलाई पनि उस्तै लक्षण
जगरनाथपुर गाउँपालिकामा पछिल्लो १० दिनमा ११ जनाको मृत्यु भएको गाउँपालिका स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । तीमध्ये ४ जनाले मात्र कोरोना परीक्षण गराएका थिए । मृत्यु हुनेमा ७ जना एउटै टोलका छन् ।
गाउँपालिकाका स्वास्थ्य प्रमुख प्रभेन्द्रप्रसाद साहले सोमबार स्वास्थ्य कार्यालय पर्सा, नारायणी अस्पताललाई पत्राचार गरी गाउँमा सयौँको संख्यामा ज्वरोका बिरामी देखिएको जनाउँदै विज्ञसहितको चिकित्सक टोली खटाउन अनुरोध गरेका थिए । साहका अनुसार चिलझपटी टोलमा वैशाख २० देखि २७ सम्ममा ७ जनाको मृत्यु भएको छ । स्वास्थ्य शाखाका अनुसार मृत्यु भएका ४ जनामा कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भए पनि परीक्षण गरिएको थिएन ।
जगरनाथपुर–३ जमुनियाका श्रीकान्त यादव घरघरमा ज्वरोका बिरामी रहेकाले अवस्था भयभीत बनेको बताउँछन् । ‘गाउँपालिकाले न परीक्षण गर्न सकेको छ,’ उनले भने, ‘न त जनचेतना फैलाएको छ । ज्वरोका बिरामीले औषधिसमेत पाएका छैनन् ।’ गाउँपालिकाले हालसम्म आइसोलेसन सेन्टर पनि बनाएको छैन । यसबारे बुझ्न स्वास्थ्य कार्यालय पर्साका प्रमुख कामेश्वर चौरसियालाई पटकपटक फोन गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।
प्रकाशित : वैशाख २९, २०७८ ११:४४
म्यानमारमा बम विस्फोट : एकको मृत्यु, नौ घाइते
सीमा विवाद मात्रै चीन−भारतको सम्पूर्ण सम्बन्ध होइन : चीन
९० प्रतिशत रुसी तेलमा प्रतिबन्ध लगाउने ईयूको सहमति
पानी प्रयोगबारे भारत-पाक वार्ता
श्रीलंकालाई विश्व बैंकले ७० करोड दिने
रुसी आक्रमणले युक्रेनमा कति क्षति ?
धान दिवसको सार्थकता
सम्पादकीय असार १५, २०७९
अन्यथा केही नभए, आज ‘राष्ट्रिय धान दिवस’ भन्दै देशभर उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले पनि तामझामका साथ हिलोमा पस्ने र धान रोप्ने काम गर्ने छन् ।